Qaban Qaabada 15-May Maalinta SYL oo si Xawli ah uga Socota Magaalada Muqdisho (VIDEO) - Hablaha Media Network
HMN:- Waxaa magaalada Muqdisho ka socda qaban qaabada Xuska Munaasabadda 74-aad ee aasaaskii xisbiga dhalinyarada Soomaaliyeed ee SYL, kaas oo maanta ka dhacaya magaalada Muqdisho iyo meelo kale oo magaalooyinka Soomasliya.
Ururrada Dhalinyarada, Wasaaradda Dhalinyarada iyo Isboortiga iyo bulshada rayidka ah ayaa lagu wadaa in si isku mid ah ugu dabaal-dagaan xuska maalintaasi astaanta u ah dhalinyarada iyo wadaniyadda.
Madaxda sar sare ee dalka ayaa lagu wadaa inay ka qeyb-qaataan dabaaldegga maalintan weyn, waxayna Hadalo ka jeedin doonaan Munaasabadda Xuska 15-ka May .
Maamulka Gobolka Banaadir, ayaa sanadkan xuska 15-May halku dheg uga dhigay Nabad iyo Nolol.
Madaxweynaha Somaliya, ayaa lagu wadaa inuu ka qayb galo xaflad maanta ka dhaceysa Muqdisho oo looga hadlaayo arimaha 15-ka May iyo sida dowladda Soomaaliya ay u weynaynayso maalinta dhalinyarada, Sanad kasta Maanta oo kale ayaa waxaa loo dabaaldagaa maalinta xuska 15-May oo ah maalinta dhalinayarada Soomaaliyeed.